समतल रात | नेपाली पब्लिक समतल रात | नेपाली पब्लिक
अष्ट्रेलिया काण्डः पीडित युवतीले दिइन् अष्ट्रेलियाबाटै… बिहीबार दिनभरका प्रमुख खबरहरू – छुटाउनु… कांग्रेसको विवाद मिल्योः १४ औं महाधिवेशन… प्राचिनकालमा यसरी हुन्थ्यो सेक्स ! नेपालको कम्युनिष्ट शासन प्रणाली दुनियाँको कुनै… सय विकेटको कोशेढुङ्गाबाट सन्दीप एक विकेट… बीमाको रकम भुक्तानी नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा…
नेपाली पब्लिक २०७६, ३१ श्रावण शुक्रबार १७:२२
अनुवादक : डा. गीता त्रिपाठी
जब म बिउँझै थिएँ, रात सुतिरहेको थियो।
कोठाको चकमन्नतामा झ्यालको सामुन्ने एउटा सपना निकैबेरदेखि अर्धनिद्रामा उँघिरहेको थियो। त्यसको परेली बोझिलो हुँदै थियो। आँखा मिच्दै, परेलीहरू झिम्झिमाउँदै र विस्तारै–विस्तारै निद्राले परेलीहरूलाई मृत्युमय अचल बनाएको थियो। उता बाहिर रातको रङ झनै गाढा भएर फक्रिरहेको थियो।
रातका अनेक रङ्गहरू छन्। यस रातका कैयन् रूपहरू छन्। यो रात जो कालो पनि छ, यो रात जो नीलो पनि छ। यो रात फेरि सेतो हुँदै पनि जान्छ। मैले यो रातलाई मृत्युजस्तै पहेँलिँदै गएको पनि देखेको छु। यो रात गोलो पनि छ। यो रात लामो पनि छ। यो रात यतिमात्र होइन, त्रिकोणात्मक पनि छ तर …
त्यो रात समतल थियो, शून्य रात, जस्तो भित्तामा टाँसिएको झ्याल, जस्तो आँखामा जडिएको सपना।
ती दिनहरूमा रातको एउटै रूप थियो, मात्र एउटै केन्द्र थियो– त्यस रातको। मेरो रात ! मेरो साँझबिहान, मेरा सारा समस्याको समाधान, मेरा प्रत्येक क्षणहरूको केन्द्रमा तिमी नै थियौ। ती दिनहरूमा पनि म तिमीलाई यसै झ्यालमा बसेर आउने–जाने गरेको हेरिरहन्थेँ। घन्टौँ यही झ्यालको सामुन्नेमा बसेर म तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहन्थेँ। यो सडक जुन हाम्रो बस्ती हुँदै अगाडिको राजमार्गसँग जोडिन्छ, मेरै झ्यालको छेउ भएर मेरो आँखाबाट ओझेल पर्छ। यही सडकले मेरो झ्यालको यस परिदृश्यसँग परको दोस्रो परिदृश्यलाई मिलाउँछ। ती दिनहरूमा पनि मेरो जीवनको डोरीलाई यही झ्यालले त्यो अर्को डोरीसम्म पुर्‍याएर मिलाइदिएको थियो, जहाँ तिमी उभिरहेकी थियौ, त्यो गल्ली मेरो झ्यालको सामुन्ने भएर पर चोकसँग मिल्छ आज पनि।
ती दिनहरूमा तिमी थियौ, यो सडकको लम्बाइ पनि केवल अढाइ मिनेट लामो थियो।
रात एकदम लामो थियो। उज्यालो थियो। मसँग तिम्रो धड्कनको न्यानो थियो। तिम्रो श्वासको सुवास थियो। ती क्षणहरूमा रात तिम्रै काँधमा लपेटिएर जान मन पराउँथ्यो। तिमी थियौ जिन्दगीका सारा अर्थहरू, उद्देश्यहरू समेटिएर एकै विन्दुमा आइपुग्थ्यो। सारा रात समेटिएर एक कविता बन्थ्यो, त्यो कविता तिमी थियौ, त्यो शून्य जहाँ कविता लेखिन्थ्यो त्यो म थिएँ, त्यो विन्दु जहाँ हामी दुवै उपस्थित थियौँ।
र त्यो बेला दिनको लम्बाइ तीन सय बीस कदम थियो। तिमी आउँदा–जाँदा मैले तिम्रो पाइला गनेको थिएँ। त्यस सन्नाटामा तिमी आइरहेको पदचाप म मेरो ढुकढुकीमाथि हात राखेर सुन्थेँ– तीन सय बीसपटक र फेरि दिन अस्ताउँथ्यो। मेरो दिलको धड्कन पनि निस्तेज हुँदै जान्थ्यो। कतै टाढा बस्तीबीच हुँदै तिम्रो पदचाप हराउँदै जान्थ्यो, मेरानिम्ति सडकको अर्थ पनि मेटिन्थ्यो। एउटा लामो रात मेरो आँखासामु आएर पल्टन्थ्यो, त्यो अपार रात मेरो निम्ति जसको कुनै आदि र अन्त्य हुँदैनथ्यो …
तर, यस्तैमा एकदिन तिमीले मेरो कोठालाई त्यस राजमार्गसँग मिलाइदियौ र यसरी सडकको एक अध्याय मेरो कोठामा प्रवेश गरेको थियो।
तिम्रो पाइलाको पारिमाणिक पदचापको गति विच्छेद भयो। तिम्रो प्रत्येक पाइलामा एकप्रकारको छटपटी र वेचैनी देखिन थाल्यो। तिमी आफ्नै पाइलाको प्रतिध्वनिसँग आफै चकित हुँदै थियौ। एकप्रकारको उच्चाटलाग्दो खिन्नता र निरुत्साहले यो झ्याल छोइन्थ्यो र अचानक तिमी केही सम्झिएझैँ चारैतिर नियाल्न थाल्थ्यौ। यस्तो लाग्थ्यो, चोर भएको दिललाई नजरले नै पहरा दिइरहेछ। तिमी यसरी जान्थ्यौ कुनै बहानाको आँचल फैलाएर र म निर्दोष, त्यो बिदाइलाई मनले चुम्थ्यो।
बिहानीको त्यस बिदाइलाई आँखाभित्र थुनेर हातले परेलीहरू बन्द गर्थें र दिनभर त्यही सुन्दर आकृतिमा आफूलाई समाहित गरेर राख्थेँ। साँझ फेरि म परेली खोलिदिन्थेँ, फेरि उही बहकिएको कदम अढाइ मिनेट लामो सडक, तीन सय बीस कदम हुँदै मेरो सम्पूर्ण जिन्दगी समेटिएर मेरै अँगालोमा आइपुग्थ्यो।
त्यस समय यो रात एकदम लामो थियो। उज्यालो थियो। मसँग तिम्रो धड्कनको न्यानो थियो। तिम्रो श्वासको सुवास थियो। ती क्षणहरूमा रात तिम्रै काँधमा लपेटिएर जान मन पराउँथ्यो। तिमी थियौ जिन्दगीका सारा अर्थहरू, उद्देश्यहरू समेटिएर एकै विन्दुमा आइपुग्थ्यो। सारा रात समेटिएर एक कविता बन्थ्यो, त्यो कविता तिमी थियौ, त्यो शून्य जहाँ कविता लेखिन्थ्यो त्यो म थिएँ, त्यो विन्दु जहाँ हामी दुवै उपस्थित थियौँ।
… अनि फेरि त्यो विन्दु, त्यो कविता पनि विलीन भयो, त्यो रात पनि बितेर गयो।
अब त झ्यालको दुवै अध्याय छुटिसकेको छ। झ्यालको त्यो भाग पनि फुटिसकेको छ, जहाँ तिमी उभिने गथ्र्यौ। अब त यो सानो सडक त्यो राजमार्गसँग गएर मिल्दैन पनि। अब त यो सडक यो झ्यालको छेउ हुँदै पार हुन छाडिसक्यो। तर, अझै पनि एक सपना झ्यालमा बसेर उँघिरहन्छ र रातको यस बदलिँदै गएको रूपलाई हेरिरहन्छ, जुन रात नीलो पनि छ, गोलो पनि छ। जुन रात सेतो पनि छ, लामो पनि छ।
यस सडकमा त्यसपछि मैले कोही पनि आइरहेको देखिनँ, न त कोही गइरहेको नै देखेँ। मैले त केवल तिम्रो पाइला गनेको थिएँ, तिम्रो कदमको पदचाप सुनेको थिएँ। मलाई थाहा छैन, त्यो कहिले यो सडकबाट पार गर्दै थियो, त्यो को थियो? जसले तिम्रो कदमको टुटेको गतिलाई फेरि जोडिदियो र तिमीले मतिर आउन छोडिदियौ। तर, मैले तिम्रो प्रतीक्षा गर्न कहिल्यै छोडिनँ। मेरो लागि त तिमी अहिले पनि यस सडकबाट पार गरिरहन्छ्यौ। तर, तिमीले कहिल्यै फर्किएर हेरिनौ। आज पनि यी दुई आँखा यही झ्यालमा बसेर तिमीलाई पर्खिरहेका छन्।
तिमी अझै पनि यही सडक पार गरेर जान्छ्यौ तर तिमीले फेरि कहिल्यै आँचल फैलाइनौ, बिहान जाने बेला कहिल्यै बिदा मागेर गइनौ।
हरेक बिहान विरहको आगो दिलमा राखेर जलिरहन्छ र जल्दाजल्दै साँझसम्म सबै खरानी भइसक्छ, छरपस्ट भएर फैलिरहन्छ।
तर त्यो रात एकनासको थियो, एकदम समतल थियो।
त्यो रात केवल समतल थियो, जस्तो भित्तामा टाँसिएको यो झ्याल !
जस्तो आँखामा जडिएको सपना !
(कथाकार गुलजार साबको ‘चौरस रात’ शीर्षकको कथा रावीपार कथा सङ्ग्रहबाट साभार गरी अनुवाद गरिएको।)
वेस्ट इन्डिजका स्मिथले टिम भैरहवाबाट…
बिद्यालयको स्तरोन्नतीका लागि महायज्ञ, पहिलो…
तस्विरमा सोनाम ल्होसार
बाच्छाबाच्छी हुर्काउनै समस्या